HomeWararka CiyaarahaWest Ham United 3-2 Chelsea: Arthur Masuaku oo West Ham ka Caawiyay Garaacista Blues oo Hogaanka Lumin karta
December 4, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Warka Xiisaha Leh 0
Arthur Masuaku ayaa gool soo daahay dhaliyay iyada oo West Ham ay u dagaalantay inay 3-2 ku garaacdo kooxda hogaanka u haysa Premier League ee Chelsea kulan xiiso lahaa oo ka dhacay London derby.
Gool uu madax ku dhaliyay Thiago Silva ayaa hogaanka u dhiibay kooxda heysata horyaalka Yurub ee London Stadium, lakiin Manuel Lanzini ayaa rigoore ku dhaliyay daqiiqadii 40aad ka dib qaladaad ay sameeyeen Jorginho iyo Edouard Mendy.
Mason Mount ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool ku laad u dhaliyay Chelsea oo hogaanka ciyaarta ku soo ceshatay,laakin Jarrod Bowen ayaa kubad joog hoose oo heer sare ah soo qaaday isagoo mar kale hogaanka u dhiibay Hammers.
Blues oo isku xoojisay Romelu Lukaku oo kursiga keydka ka soo kacay waqtigii nasashada ayaa laga dhaliyay goolka guusha Masuaku ayaa soo qaaday karoos uu gaari waayay Mendy iyadoo seddex daqiiqo ciyaarta ka harsantahay.
Guuldaradan ayaa la macno ah in Chelsea u dhacdo kaalinta labaad ama saddexaad ahadii liverpool ama manchester city ay guulo gaaraan.
Chelsea ayaa wajihi doonta Zenit meel ka baxsan garoonkeeda tartanka Champions League Arbacada soo socota, halka West Ham ay martigelin doonto Dinamo Zagreb Europa League maalinta xigta.